फेब्रुअरी ७ देखी १४ सम्म भ्यालेन्टाईन सप्ताहको रुपमा मनाईन्छ । यस बर्षको भ्यालेन्टाईनसप्ताह पनि ७ फेब्रुअरी, रोज डे देखी सुरु भईसकेको छ । कसरी आफ्नो पार्टनरलाई खुसी राख..
हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न हामीले धेरै कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । शरीरका केही अंगहरु अति संवेदनशील हुन्छन् । ती अंगहरुको हामीले बढ्ता ख्याल राख्नुपर्छ । हाम्रा केही ..
ज्योतीषका अनुसार पर्समा केहि यस्ता कुराहरु राख्नाले शुभ फल प्राप्त हुन्छ । र केहि यस्ता चिजहरु पनि छन् जसलाई पर्समा राख्नाले नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै नोक्सान पनि ब..
यी ६ कुरामा ध्यान दिनुहोस् नत्र सम्बन्ध बिग्रन सक्छ ।
जसरी महिलाले आफ्नोे लोग्ने अरु महिलासँग बसेर गफ गरेको रुचाउँदैनन् त्यसैगरी लोग्ने मानिसहरु पनि आफ्नोे श्रीमती अन्य पुरुषसँग गफ गरेर बसेको मन पराउँदैनन् । किनकी कहिले कु..
नेपालमा बर्षेनी ३० हजार जना क्यान्सर रोगी थपिने गरेका छन् । नेपाल क्यान्सर अस्पतालका मेडिकलका डाईरेक्टर डा प्रकाशराज न्यौपानेले नेपालमा बर्षेनी ३० हजार क्यान्सर रोगी थप..
यदि तपाई आफुले प्रयोग गरेको परफ्युमको बास्ना दिनभर ताजा राख्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले एउटा सजिलो तरीका अपनाउनु पर्ने हुन्छ । जब तपाई बाहिर निस्कनु हुन्छ फ्रस्टेट हुनुको ..
जसरी एक पुरुषलाई आफ्नो जीवनमा एक महिलको साथ आवश्यक पर्छ त्यसैगरी एक महिलालाई पनि आफ्नो जीवनमा एक पुरुष को । जतिसुकै आत्मनिर्भर किन नहोस् कुनै न कुनै मोडमा एक अर्काको आवश्यकता खट्कीरहन्छ । दुबैका आ–आफ्नो कारण हुन्छन् । यो कुरालाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । कि एक अर्का विना जीवन निर्वाह गर्न कठीन मात्र हैन […]
सफलता हासिल गर्नको लागि एउटै गतीमा अघि बढ्नु राम्रो मानिन्छ । हामी खासगरी क्षमता र समय अभाव, असफलताको कारण देखाउँछौं । जबकी साधारण कुरालाई ध्यानमा राख्नाले क्षमता र समयको बचत हुन्छ । र काम पनि राम्रो हुन्छ । सफल हुनको लागि यी ५ कुरामा ध्यान दिनुहोस् । १. हामी धेरै पटक काम शुरु गर्छौं र […]
विवाह पुरुष र स्त्री बीचको एक यस्तो धर्म सम्बन्ध पनि हो जुन कर्तव्य र पवित्रतामा आधारित हुन्छ । यो एक वैज्ञानिक तथ्य पनि हो । शारिरीक,मानसिक, र आध्यात्मिक स्तरमा स्त्री र पुरुष दुबै अधुरा हुन्छन् । स्त्री र पुरुषको मिलनले नै यो अधुरोपनलाई टाढा राख्न सक्छन् । त्यसैले बैवाहिक सम्बन्धलाई लामो समयसम्म टिकाई राख्न श्रीमान् […]
केहि पोषणविद्हरुले पनि भनेका छन्, मानिसले आफ्नो ब्लड गु्रप अनुसार खाने कुराहरु खानाले शरिरलाई धेरै फाईदा पुग्छ । डा. पिटर जे डी इेडेमाकी किताबमा ब्लडगु्रप चार्टमा यस बारेमा केहि कुरा उल्लेख गरिएको छ । जसमा लेखिएको छ, कुन ब्लड गु्रप हुने मानिसले कस्तो प्रकारको खानेकुराहरु खानु पर्छ । ओ ब्लड ग्रुप यो गु्रप हुने व्यक्तीहरुले [&hell..
विवाह पछि पति पत्नी बिचमा वाद विवाद हुनु सामान्य कुरा हो । तर केहि यस्ता कुराहरु हुन्छन् । जुन कुरा गर्नाले तपाईको बैवाहिक सम्बन्धमा बाधा आउन सक्छ । तपाईको पतिले तपाईलाई सम्मान नदिन पनि सक्नु हुन्छ । पतिले सम्मान नगर्ने केहि कारणहरु यी पनि हुन सक्छन् । कहिल्यै पनि अरुको अगाडी बहस नगर्नुहोस् । तपाँईको […]
मनुस्मृतिको एक श्लोकमा भनिएको छ की यी ७ चिजलाई विना संकोच लिनुहोस् । तपाईको जिवन सफल रहने छ । श्लोक यसप्रकार छः स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सभाषितम् विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ।। अर्थ ः जहाँ कहिँ या जो सुकै होस् राम्रो या नराम्रो मानिस,राम्रो या नराम्रो स्थान आदिमा ध्यान नदिई सुन्दर स्त्री, रत्न, विद्या, [&he..
विवाह गर्ने सहि उमेर हालसम्म कसैले पनि थाहा पाएको छैन । विवाह गर्न जति सजिलो छ त्यसलाई सम्हाल्न त्यति नै गाह्रो । विवाह जति छिटो गन्छि त्यति नै राम्रो भन्ने मानसीकता हामी धेरैमा पाउँछौ । हाम्रो देशमा एउटा भनाई छ विहे बारी २० पारी । तर अहिलेका युवायुवतिहरु २५ देखि ३० बर्ष पुगेपछि विवाह गर्न […]
प्याज तरकारीका लागि व्यापक रुपमा प्रयोग हुने गर्छ । कतिपयले सलादको रुपमा पनि प्याज खाने गर्छन् । जब प्याजको भाउ बढ्छ धेरैले टाउको दुखाउने गरेका छन् । सरकारको व्यापक आलोचना गर्न थाल्छन् । यो हिसाबले पनि हाम्रो भान्सामा प्याजको महत्व बढी छ भन्ने बुझिन्छ । तर, हामीले प्याज उपभोग गर्दा यसका बहुगुणबारे त्यति ख्याल गर्ने […]